Mutsva Complete Guide To Italy By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Mutsva Complete Guide To Italy By Train
Get vakagadzirira icharidzwa kure pamwe Italy nechitima pedyo paunoona danho rutsoka kunyika yawo huru. Nyika kare, nakisa akitekicha, hunhu hwakawanda, uye yakashongedzwa zvakadaro, zvakaoma, uye vane hunhu hwakanaka vanozove chimwe chinhu chauchayeuka kusvikira zuva rako rekupedzisira! Unoda kuziva chakavanzika? Italy nechitima kunotokosha zvikuru kupfuura iwe unogona kufungidzira!
ikozvino, sezvo imi muri kuenda nyika Romeo uye Juliet nechitima, heano mazano anobatsira zvimwe kuda kutevera (kunyanya kana wanga kumbobvira kuItaly uye regai kutaura mutauro zvakatsetseka):
Kuwana Way Your kumativi Italy By Train Schedule
Nokuti munhu wose aifamba munzvimbo Italy nechitima uye achida kuti avo zvinhu pamwe chete, kusarudza:
Trenitalia, National njanji basa yose yenyika migwagwa; chitima chenguva dzose.
Italo chitima, nokuti mukuru-nokukurumidza nezvitima / pakutengeserana.
Yakanaka kuita kuti tarisa Italy nechitima, uye kuti kuva pamusoro akachengeteka divi: enzanisa mitengo, mazuva, uye nguva uye uwane sarudzo inokodzera bhajeti rako uye mepu yako yekufamba. Tora Kutarira zvose kuenzanisa purogiramu. Zvimwe nokuvhiringidzwa mazwi, saka pano ndivo rakapfupikiswa siyana uchawana pamusoro Trenitalia saiti:
Rome termini (nechepakati chiteshi) -> Te ROMA
Naples Central (nechepakati chiteshi) -> NA C.The
Florence Santa Maria Novella (nechepakati chiteshi) -> Fl.SMN
Venice Santa Lucia chiteshi
Venice Saint Lucia (pachitsuwa) -> AND. S.L.
Venice Mestre (haizi pachitsuwa) -> TENZI
Milan Central (nechepakati chiteshi) -> MI C.le
Piazza nePríncipe (nechepakati chiteshi) -> GE P.P.
kuGenoa Stazione Brignole -> GE BRIG
La Spezia Centrale (nechepakati chiteshi) -> chirungo
Pisa Centrale (nechepakati chiteshi) -> Pisa C.
Kuchava nguva apo iwe tora Italy nechitima uchaona rimwe chiteshi zita pamusoro anozivikanwa nhema, zvichiteverwa nevamwe tsvuku; ichi rinoratidza pane zvishoma chitima nenhepfenyuro muguta uri kuenda, pamwe chitima achitora iwe vose chitima kwamira.
Unofanira Book Italy Your nechitima Ticket Online kana Tenga It panguva Station?
Nhau huru pamusoro pekunyorera tikiti rako kuenda kuItaly nechitima ndechekuti iyo online yekubhuka sisitimu inoshanda mushe uye yakavimbika kwazvo. Stations kwose kwose kunogona kuva ungana - uye anoda KUTI mhando kunetseka, rudyi? You vanopiwa mukana wokusarudza kana bhuku kana kubhadhara zvakananga nokuda kwenyu chitima tikiti paIndaneti. zvisinei, kana uri zvose pamusoro spontaneity - kumirira kusvikira masvika yemapurisa uye kutenga tikiti renyu ndokubva.
KuCologne Dortmund Zvitima
Munich kuna Dortmund Zvitima
Hanover kuna Dortmund Zvitima
MuFrankfurt kuna Dortmund Zvitima
Sei Svika Italy nechitima kamwe You Got Ticket Your?
Paunosvika Italy nechitima chezvitima, yako inotevera zano iri guru anorembera bhodhi. Ndipo paunowana zvese zve yakagadziridzwa ruzivo unoda. Kana musingadi kuona bhodhi, tsvaka revanhu vamire pasi chinhu chikuru - uye voila! Kana musingadi kuchengeta chitima wako dziri pakarepo, musatanga panicking. Iva nechokwadi uri kutarisa "Partenze" (kusimuka) pane "Arrivi" (vanosvika) kudzivisa kuvhiringidzika. Muduku dzinovhiringidza wokusarudza zvose zviri kuenda nechitima nhamba uye kuenda nguva. Kana wawana chitima yako, tsvaka "Bin,"Nokuti" binario " (dandara). Kamwe wawana kuti arongwe, ndizvozvo kuenda!
Pane ari aitamba ndakanzwa kamwe: Pose iwe sokuti ndakashata kana vakasurukirwa, kuenda Italy nechitima. Pasinei zvisakafanira munotarisira, varume vemo Achashevedzera "Bella!"Mushure iwe. -yevedza, rudyi? Usamirira kwechinguva chiduku, bhuku tikiti rako saveatrain.com uye kutanga kurongedza kuItaly!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fguide-to-italy-by-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
tikiti rechitima Train Travel travelitaly